I-Online Academic French for Kids - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Funda isiNgisi nesiFulentshi online
Kubukhoma kusuka eMontreal
Nikeza izingane zakho ikusasa eliqhakazile!IZINHLELO ZE-BLI ONLINE zentsha nezingane
Ingabe uhlala eMadrid, Beijing, Germany, Mexico, Brazil, Colombia… noma kwenye indawo emhlabeni? Ungathanda ukufunda isiNgisi noma isiFulentshi ngothisha abahle nabanobungane baseCanada abazokugqugquzela? Funda isiNgisi noma isiFulentshi ukwakha induduzo yekhaya lakho! Joyina olunye lwezinhlelo zethu ezinhle ze-inthanethi ezenzelwe ngokucophelela ukukusiza ufunde noma uthuthukise ulimi olufundayo!
Joyina amakilasi ethu namuhla!
Thuthukisa amakhono akho ezemfundo ngesiFulentshiI-French Academic
Abafundi bazofunda yonke imiqondo eyisisekelo yohlelo lolimi oludingekayo ukuze bathuthukise ukunemba kwabo, ukushelela kanye nezinga lamakhono ku-French.
Lesi yisigaba esisebenzisanayo lapho abafundi benethuba lokusebenzisa lolimi futhi befunda ngemithetho ngokutholwa, ngokuholwa uthisha kanye nezincazelo eziningi ezibanzi.
Kugcizelelwa kakhulu ukukwazi ukuxhumana besebenzisa amaphuzu wolimi afundwa kahle.
Isifundo sinikeza ababambiqhaza amathuba amaningi okuzijwayeza kanye nokwenza amakhono akhe.
Abafundi bazokwazi ukuqhuba amakhono olimi ama-4 (ukulalela, ukukhuluma, ukufunda nokubhala) esimeni esididiyelwe kanye nekilasi eligxile kubafundi eligxile ekusebenzeni ngababili, imisebenzi yokudlala indima nasekufundeni okusebenzayo.
Abaqalayo - NgoMgqibelo
Okuphakathi - NgoMgqibelo
Zonke izikhathi ezikhonjisiwe yiMontreal Local Time EST
Meyi 25, Juni 22, Julayi 20
Agasti 17, Septhemba 14
Imali Yokubhalisa: $ 100
Iseshini engu-1 = amasonto ama-12